Qarax ismiidamin ah oo ka dhacay goob ay ku cibaadeysanaayen dad shiica ah – The Voice of Northeastern Kenya
Qarax ismiidamin ah oo ka dhacay goob ay ku cibaadeysanaayen dad shiica ah
Qarax ismiidamin ah oo lala bartilmaamedsaday goob aas lagu waday in u ka dhaco ee kutaalo dalka Iraq ayaa waxa ku dhintay ilaa iyo 35 qof halka 65 ay ku dhaawacmen sida laga soo xigtay qaar kamid ah saraakiisha booliska iyo hawlwadeenada caafimaadka ee isbitaalada la geeyay dadka dhaawaca ah.
Qaraxa ayaa waxa la sheegay in u dhacay xiliga qadada ee maanta waxana sidaas sheegay qaar kamid ah saraakiisha waxana ay ka gaabsaden in magacyadooda ay xusan iyago taasina u cuskaday in aan loo fasixin in ay la hadlaan warbaahinta.
Qaraxaas marka u dhacay durbadiiba wax sheegtay ma aysan jirin balse waxa qaraxyada noocas oo kaleba mararka qaar geeysata kooxda isu magcaawday dawladda khilaafada islaamka ee Isil.
Isil ayaa mudooyinkan dambeba dar dar galineysay weerarada ay ku qaado goobaha ay dawladda gacanta ku haysa waxana lagu xasuusta weerarka ay waddanka Iraq ka geeysatay 9-ka bishan oktobar kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 5 qof halka 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmen.
Bilooyinki ugu dambeeyay ayaa waxa waddanka Iraq ka dhacaayay qaraxyo waxana ugu xumaa qaraxi waddankaas ka dhacay bishi July ee sanadkan kaas oo ka dhacay goob dukameysi ah oo ku taala magaala madaxda waddankaas ee Baghdad,qaraxaas oo loo adeegsaday gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa ku dhintay dad dhan 300 oo qof .
← Mareykanka oo qorsheynaya weerar dhanka Internetka ah oo uu ku qaado Ruushka
Xoghaya ururka shaqaalaha ee COTU Francis Atwoli oo ugu baaqay gudiga EACC in ay faraha kala baxan lacaga ay qaatan dadka hawlgabka noqday →